Ndị Fulani na-achi ehi egbuola mmadụ 2,000 n'afọ a - BBC News Ìgbò
Ndị Fulani na-achi ehi egbuola mmadụ 2,000 n'afọ a
10 Eprel 2018
Nkenke aha onyonyo Nsogbu dị n'etiti ndị ọchịehi na ndị ọrụgbo na-emetụta ikọpụta ihe oriri
Otu na-ahụ maka ikike ruru onye bụ nke akpọrọ "Coalition on Conflict Resolution and Human Rights in Nigeria" kwuru mmadụ ruru puku abụọ anwụọla ka puku na puku ọzọ agbala ọso ndụ maka nsogbu ndị n'etiti ndị na-achị ehi na ndị ọkọ ugbo.
Ndị a kwuru ihe a n'akwụkwo nyocha ha depụtara ụbọchị Monde.
Dịka onye ntaakụkọ BBC bụ Chris Ewokor sị kọwa, otu a kwuru na ha nwetara ọnụ ọgụgụ a site na ịgụkọ mmadụ egburu, ụlọ na ihe ndị ọzọ emebiri na ihe so ya ọgụ dị n'etiti ndị ọchịehi na ndị ọrụgbo banyere ala na mmiri.
Otu ahụ kwuru na ọgbaghara ndị a metụtara steeti ndị dị na etiti ugwu Naijiria dịka Benue, Taraba, Plateau, Kogi na Nasarawa; nke mere ka ndị ọchịchị wezuga iwu Naijiria n'ụsọ iji gba mbọ nchekwa na mpaghara ndị ahụ.
Okwu mwakpo ndị ọchị ehi a ga-ebi ebi?
Ndi agha Naijirịa agọrọla isi ha
Akwụkwọ nyocha ahụ gosikwara na e wezuga ọgbaghara dị n'etiti ndị ọchịehi na ndị ọrụgbo, ndị ohi kwanyere ahụ na nsogbu nchekwa e nwere were na-egbu mmadụ ma na-ezu ohi n'ọtụtụ ime obodo.
Ka ọ dị ugbua, e zigala ndịagha na mpaghara ndị nwere nsogbu a metụtara, ebe ha nwụchigara ụfọdụ.
Mana mwakpo ka na-aga n'ihu n'ọtụtụ ime obodo.
Anambara esonyela na steeti na-eme mmanu
Ipob: Mpụtagharị Buhari ga-enye anyị Biafra
Christmas sales: Lee ka ị ga-esi were tekinụzụ ree ahịa gị gwogwo
A maala otu nwaanyị ikpe ọnwụ n'Ebonyi